December (16) November (21) October (26) September (28) August (25) July (27) June (27) May (26) April (28) March (30) February (7) January (1) Beeraha iyo Xoolaha XOOLO-DHAQATADA QANSAXDHEERE OO KA CABANAYA XANUUNNO AY XOOLAHA U DHIMANAYAAN Xoolo-dhaqatada ku nool degmada Qansaxdheere iyo deegaannada ku xeeran ee gobolka Bay ayaa ka cabanaya xanunno aan la aqoon oo ay u dhimanayaan xoolaha. Halkan ka dhegeyso faahfaahinta warbixintan oo ...
QIIMAHA XOOLAHA EE SUUQYADA SOOMAALIYA Dhegeyso xubinta qiimaha xoolaha oo laga soo diray suuqyada magaalooyinka Kismaayo, Jowhar, Laascaanood. Waxaa soo jeedinaysa Faadumo Macallin Abuukar. ...
QIIMAHA XOOLAHA NOOL EE SUUQYADA SOOMAALIYA Ku soo dhowaada wararkii qiimaha xoolaha oo aan maanta ku soo qaadanayno sayladaha Saakow oo gobolka Jubbada Dhexe ah iyo Afgooye oo Shabellaha Hoose ah . Waxaa soo kala diray weriyayaasheena Axmed Cu...
27 JUL 2016 Akhri
Daanyeer curyaamiyay wax-soo-saarkii beeraha duleedka Boorama (ERGO) - Sanadkii hore beeraha ku yaalla duleedka magaalada Boorama ee gobolka Awdal kama soo go’in dalag badan oo loo iib keenay magaalada. Dalaggan oo u badan hadhuudh iyo galley ayaa wax...
QIIMAHA XOOLAHA EE SUUQYADA SOOMAALIYA Halkan ka dhegeyso xubinta qiimaha xoolaha oo laga soo kala diray magaalooyinka Muqdisho iyo Buhoodle. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Xasan....
26 JUL 2016 Akhri
QIIMAHA XOOLAHA NOOL EE SUUQYADA SOOMAALIYA Ku soo dhowaadda wararkii qiimaha xoolaha oo aan maanta ku eegayno sayladaha Hadaaftimo oo gobolka Sanaag ah, Qardho iyo Boosaaso oo gobolka Bari ah iyo Beledweyne oo gobolka Hiiraan ah. Waxaa soo kal...
25 JUL 2016 Akhri
QIIMAHA XOOLAHA NOOL EE SUUQYADA SOOMAALIYA Ku soo dhowaada qiimaha xooluhu ka marayaan saylada Boorame ee gobolka Awdal. Waxaa soo diyaariyey Cabdala Cali Yusuf waxaana soo jeedinaysa Faadumo Macalin...
QIIMAHA XOOLAHA EE SUUQYADA SOOMAALIYA">QIIMAHA XOOLAHA EE SUUQYADA SOOMAALIYA Dhegeyso xubinta qiimaha xoolaha oo maanta laga soo kala diray magaalooyinka Laascaanood, Awrboogeys iyo Jowhar Waxaa soo jeedinaysa Faadumo Macallin Abuukar....
22 JUL 2016 QIIMAHA XOOLAHA EE SUUQYADA SOOMAALIYA">Akhri
QIIMAHA XOOLAHA NOOL EE SUUQYADA SOOMAALIYA Halkan ka dhegeyso xubinta qiimaha xoolaha nool oo laga soo kala diray magaalooyinka Garowe iyo Eyl oo Nugaal ah; iyo Xarfo iyo Saaxo oo Mudug ah. Waxaa soo kala diray Cabdiraxmaan Maxamed X...
21 JUL 2016 Akhri
DAAYEER WEERAR JOOGTO AH KU HAYA BEERAHA BOORAMA Beeraha ku yaalla duleedka magaalada Boorama ayaa waxaa fara ba'an ku haya daayeerro weerarro joogto ah ku haya oo burburnaya dalaggana cunaya. Beeralleyda oo deyrtii hore aan dalag badan ka helin bee...
QIIMAHA XOOLAHA NOOL EE SUUQYADA SOOMAALIYA Ku soo dhowaada qiimaha xoolaha oo aan maanta ku eegayno sayladaha degmada Luuq oo gobolka Gedo ah iyo Afgooye oo Shabeellaha Hoose ah. Waxaana soo kala diray Axmed Cumar Saalixi iyo Maxamed Deeq.
20 JUL 2016 Akhri
QIIMAHA XOOLAHA EE SUUQYADA SOOMAALIYA Halkan ka dhegeyso xubinta qiimaha xoolaha oo laga soo kala diray magaalooyinka Muqdisho iyo Buhoodle. Waxaa soo jeedinaysa Faadumo Macallin Abuukar....
QIIMAHA XOOLAHA NOOL EE SUUQYADA SOOMAALIYA Ku soo dhowaada qimaha xoolaha ee sayladaha Hadaaftimo oo Sanaag ah, Boosaaso iyo Qardho oo Bari ah iyo Beledweyne oo Hiiraan ah. Waxaana soo kala diray weriyayaasheenna Faadumo Taxadar iyo Jamaal Cal...
Beeralayda mooska Afgooye oo aan xilligaan miro goosan Saddex boqol oo beerood oo moos ah ayaa baaba'ay, kuwaas oo ku yaalla deegaanno ay ka mid yihiin Jambaluul, Awgooyo, Arimoog iyo kuwo kale oo hoos yimaada degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha h...
Beeraha mooska ee Afgooye oo ku baaba'ay biyo la'aantii webiga (ERGO) - Beeraleyda mooska ee degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha hoose ayaa ka cabanaya khasaare beerahooda ka soo gaaray qalleylkii webiga Shabeelle ee horraantii sanadkan. Sare u kac ayaa k...
QIIMAHA XOOLAHA EE SUUQYADA SOOMAALIYA Halkan ka dhegeyso iibka qiimaha xoolaha nool ee magaalooyinka Boorama iyo Laascaanood. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Xasan....
Warbixin ku saabsan sedex milyan oo xoolo ah oo laga tallaalayo cudurro kala duwan Deegaannada Puntland waxaa ka socda tallaalka iyo daawaynta sedex milyan oo xoolo ah.Tallaalka wuxuu socon doonaa 45 maalmood, sida uu Raadiyo Ergo u sheegay Cabdiraxmaan Maxamed Xaaji oo ah agaasimah...
QIIMAHA XOOLAHA EE SUUQYADA SOOMAALIYA">QIIMAHA XOOLAHA EE SUUQYADA SOOMAALIYA Halkan ka dhegeyso xubinta qiimaha xoolaha oo maanta aan ku soo qaadanay suuqyada magaalada Jowhar iyo Baydhabo. Waxaa soo jeedinaysa Faadumo Macallin Abuukar....
15 JUL 2016 QIIMAHA XOOLAHA EE SUUQYADA SOOMAALIYA">Akhri
Puntland oo wadda howlgal ay 3 milyan oo ari ah uga tallaaleyso cudurka Sambabka (ERGO) - Wasaaradda Xannaannada Xoolaha ee maamulka Puntland ayaa 13-kii Luulyo billowday howlgal ballaaran oo 3 milyan oo ari ah looga tallaalayo cudurka Sambabka. Tallaalka wuxuu socon doonaa 4...
15 JUL 2016 Akhri
Laascaanood: Colaado hoos u dhigay ganacsiga xoolaha (ERGO) - Waxaa yaraaday tirada xoolaha ganacsiga loo keeno seyladda degmada Laascaanood ee gobolka Sool. Sare-u-kac ayaana sidoo kale ku yimid qiimaha xoolaha, arrintaas oo loo sababeynayo dagaal...
QIIMAHA XOOLAHA NOOL EE SUUQYADA SOOMAALIYA Ku soo dhowaada qiimaha xoolaha ee seyladaha Baardheere iyo Afgooye, waxaana inoo soo kala diray weriyayaasheenna Axmed Cumar Saalixi iyo Maxamed Deeq Cali. Waxaana soo jeedinaysa Fowzia Cumar ...
QIIMAHA XOOLAHA EE SUUQYADA SOOMAALIYA Halkan ka dhegeyso xubinta qiimaha xoolaha oo aan ku eegeyno seyladaha magaalooyinka Muqdisho iyo Buhoodle. Waxaa soo jeedinaya Faadumo Macallin Abuukar.
12 JUL 2016 Akhri
QIIMAHA XOOLAHA NOOL EE SUUQYADA SOOMAALIYA Ku soo dhowaada wararkii qiimaha xoolaha ee maanta oo aan ku eegayno suuqyada, Boosaaso iyo Qardho oo gobolka Bari ah, Hadaaftimo oo gobolka Sanaag ah iyo Beledweyne oo gobolka Hiiraan ah, waxaa soo k...
QIIMAHA XOOLAHA EE SUUQYADA SOOMAALIYA Maanta xubinta qiimaha xoolaha waxaan ku eegeynaa seyladaha magaalooyinka Muqdisho iyo Buhoodle. Waxaa soo jeedinaya Cabdiraxmaan Taysiir....
05 JUL 2016 Akhri
QIIMAHA XOOLAHA NOOL EE SUUQYADA SOOMAALIYA Ku soo dhoowaada wararkeenii qiimaaha xoolaha oo aan manta ku eegayno suuqyada xoolaha ee Boosaaso iyo Qardho oo gobolka Bari ah, Hadaaftimo oo gobolka Sanaag ah iyo Beledweyne oo gobolka Hiiraan ah.&...
04 JUL 2016 Akhri
QIIMAHA XOOLAHA NOOL EE SUUQYADA SOOMAALIYA Ku soo dhowaada wararkii qiimaha xoolaha, sayladaha ay naga soo gaareen waa Boorame oo uu ka soo diray weriyaheenna Cabdala Cali Yuusuf iyo Baydhabo oo uu ka soo diray Muxiyadiin Xusni. Waxaana soo je...
QIIMAHA XOOLAHA EE SUUQYADA SOOMAALIYA Xubinta qiimaha xoolaha waxay qayb ka tahay baahinta Radio Ergo. Maanta waxaan ku eegeynaa suuqyada Laascaanood iyo Dhuusamareeb. Waxaa soo jeedinaysa ...
01 JUL 2016 Akhri